Taon-jaôbily : hafatra avy amin’ny foibe nasiônaly » Tambajotram-Pivavahan'ny Papa Maneran-tany - MADAGASIKARA
« Carlo Acutis : lalana migodana mankany am-paradisa ny Eokaristia
Fanolorana ny andro : fangatahana ho an’ny aogositra 2015 »
Taon-jaôbily : hafatra avy amin’ny foibe nasiônaly
Efa maro amintsika no tsy mahandry ny fotoan-dehibe hamaranana ireo taon-jôbily eo anivon’ny AFAFI-FET, koa inoanay fa efa samy miomana amin’izany avokoa ny rehetra.
Toy izao indray ary ireo toromarika hifampizarana mba hahafahana miatrika tsara ny Famaranana Nasiônaly izay hatao eto Antananarivo ny 06-07-08 novambra 2015 :
1/ Noho ny fangatahan’ny maro dia ahemotra ny zoma 28 Aogositra 2015 ny fara-fandraisana anarana aty amin’ny Foibe Nasiônaly ; ary tsy ho voaray intsony izay tara aorian’io daty io.
Marihina fa ny 5000 Ariary dia alefa miaraka amin’ny lisitra, ary ny famenony 5000 Ariary dia tsy maintsy tonga ny faran’ny volana Septambra. Azo atao anefa ny mandoa miaraka ny 10000 Ariary amin’ny fotoana fanaterana ny lisitra.
Iangaviana isika tompon’andraikitra isan-diôsezy mba handamina ny lisitra fisoratana anarana ho toy izao : mpanabe iray mitondra ankizy 10 ; ka avy hatrany dia sarahina ny lahy sy ny vavy. Toy izany koa ny isan-tsampana (IK, VK, EKA, AFAFI). Tsy voatery mahafeno 10 ny lisitra iray. Mariho tsara ihany koa ny Zoky am-panahy (Masera, Mompera, Frera).
Tonga dia ampiarahana amin’ny « version électronique » rehefa mandefa ny anarana, ary tsy maintsy hita ao amin’ny lisitra ny sonia avy amin’ireo tompon’andraikitry ny Diôsezy.
2/ Entanina isika tompon’andraikitra rehetra mba hanomana ny fo amam-panahin’ireo ankizy sy tanora hoentintsika hiatrika io fotoan-dehibe io mba hanana ny toe-tsain’ny mpivahiny :
Vonona hivavaka fa tsy variana hijery tanàna fotsiny, na hamangy fianakaviana.
Vonona handray amin-jotom-po ireo fampianarana.
Hifandray amin’ny hafa sy hanaja azy
Hahay handray am-pitiavana izay atolotry ny mpikarakara
Hanaja ny manodidina (tontolo iainana, fahadiovana…)
Mila fitiavana sy sakrifisy avy amintsika izany, satria efa maherin’ny 3000 ireo mpizaika ho avy.
3/ Aza hadino ny mianatra ny hira faneva, izay efa naparitaka any amintsika.
4/ Araka ny efa fantatsika dia Tshirt faha-100 taona no hanaovana ny sabotsy 07 Novambra 2015, mba hanamorana ny fitandroana ny filaminana. Ny alahady, kosa, dia manao fanamiana (Tenue). Koa tsara raha manao famandrihana mialoha ho an’ny Tshirt, satria efa miha-manakaiky ny fotoana. Toy izany koa ny lakroa AFAFI-FET izay hifankafantarantsika amin’io fotoana io.
5/ Ho an’ireo rehetra mbola tokony hanefa ny trosany aty amin’ny Foibe Nasiônaly dia iangaviana mba handefa izany miaraka amin’ny fisoratana anarana fara-fahatarany, satria ilaina amin’ny fanomanana ity hetsika hataontsika ity.
6/ Aza adino ihany koa ny mandefa ny Rakitra miakatra ho an’ireo Diôsezy izay mbola tsy nahavita ny anjara birikiny tamin’ity taona ity.
Dia izay indray ary no azo ambara fa raha misy tsy mazava dia aza misalasala miantso aty amin’ny Foibe Nasiônaly.
Marihina fa tsy hisokatra ny Foibe Nasiônaly manomboka ny Alarobia 29 Jolay tolakandro ka hatramin’ny 16 Aogositra 2015.
Ny Aomônie Nasiônaly
P.Odon ANDRIANARISOA sj.